Nhau - Nyowani Gear mhando slewing dhiraivha naWanda iri kubudirira
New Gear mhando slewing dhiraivha naWanda iri kubudirira
Xuzhou Wanda slewing kubereka co., LTD.,sekuzivikanwa kwenyika kune epamusoro-tech mabhizinesi, ichaenderera mberi nekutakura basa resainzi uye tekinoroji hunyanzvi, uye nekuenderera mberi nekusimudzira kuvandudzwa kwekambani yakazvimiririra hunyanzvi, nyowani yekuvandudza chigadzirwa chigadzirwa, kuitira kuti isangane nevatengi kudiwa kwekumhanya, kwedu R & D Dhipatimendi rakagadzira nyowani inokurudzira giya kutapurirana kutenderera drive chigadzirwa GE314-6.15-25
Kuti tigadzire ichi chigadzirwa, tinotaura nezve saizi yezviripo slewing kutyaira SE12-78-H-25R, uye sarudza zvidimbu zvinodikanwa uye saizi dzinoenderana nekutaura kune akakodzera ruzivo uye kuburikidza nhevedzano yekuverenga.Mukugadzira dhizaini isu takaenderera neiyo 3D modhi kune zvese zvishongedzo, uye ndokuitisa paungano yese . Panguva yekugadzirwa kwezvikamu zvakasiyana siyana, madhipatimendi ese ekambani aishandira pamwe. Chekupedzisira, kuburikidza nemubatanidzwa wekuyedza kwemadhipatimendi ese, iyo nyowani chigadzirwa kuvandudzwa kwakapedzwa zvinobudirira, chigadzirwa chechigadzirwa bvunzo chaive chakanaka, uye dhizaini yekugadzira yakazadzikiswa.
GE akateedzana slewing kutyaira inoumbwa nedzimba dzakapoteredzwa, slewing kubereka, pinion shaft uye inotsigira zvikamu. Inogona kushandisa zvakananga mota kana hydraulic mota sosi yekuisa magetsi. Izvo zviri nyore kuisa uye kushandisa, uye inogona kuona nenzira yekutenderera uye inopesana nemawachi kutenderera. Inosanganisira spur giya yekuparadzira modhi, ine hunhu hwecompact dhizaini, inogara ichitapura chiyero, yakakwira kufambisa kugona, hupenyu hurefu hwebasa; Naslewing kubereka sechinhu chikuru, inogona kumira yakakura inopidigura nguva uye axial / radial simba.Inotora fenzi mhando base, inogona kuiswa mune yekushandisa mamiriro chinodiwa ingangoita yakakwira chiitiko, ine imwe isina guruva, isina mvura kugona.